Mashaariicdii Laasqoray ee Somaliland | allsanaag
Mashaariicdii Laasqoray ee Somaliland
Xagee ayeey marayaan mashaariicdii Siilaanyo dhagax dhigay Laasoqray.
Afar Sano ka hor Bishii March, 2014, waxa si tuugnimo ah magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag ku soo galay isaga oo Huuriyo wata, oo badda soo maray Horjoogaha beelaha Isaaq danbiile dagaal Siilaanyo.
Maalintaa uu Gacan ku dhiigle Siilaanyo yimid Laasqoray, wuxuu dhagax dhigay dhowr meelood oo uu sheegay inay Mashaariic ka hirgelinayaan. Sida Warshaddii laasqoray oo ay dib u furayaan, Wadooyin iyo Xaglo toosiye oo ah wasiirka cafimaadka maamulkaas oo isaguna sheegay inay Cisbitaalo ka dhisayaan Magaalada Laasqoray .
Hadaba maxaa ka hirgalay Mashaariicdaa?
Dhagaxii uu Siilaanyo dhigay Laasqoray oo ahaa in Warshad Kaluun laga dhisayo magaaladaas, waxa la sheegay in sadex sano ka dib maalintii Siilaanyo dhagaxa dhigay, inuu dhagaxii weli meesha yaalo oo ay ciidi qarisay
Ninka sawirkiisu kor ka ka muuqdo, isaga oo hor boodaya Gacan ku dhiigle Siilaanyo, kana mid ah horgolayaasha ama Marabbida Gobolka Sanaag waxa lagu magcaabaa Cali Buureed wuxuu ku magcaaban yahay wasiirka Kaluumaysiga . Maalintaas Odayaashii degaanka ayaa Horgalahan u sii dhiibay Daynamaddii Ceelka Laasqoray oo aan shaqaynayn. Ilaa maanta waa laga sugayaa Daynamaddii 2014 loo sii dhiibay in la soo hagaajiyo oo ay ku bixi lahayd lacag yari.
Ugu danbayntii Ninka u dhashay reer Laasqoray oo wax ka suga maamulka SNM. Maanta wax uu haysto ayuu waayi doonaa
← Baarlamaanka oo madax u doortay Danbiilayaal dagaal Mashruuca Dhismaha Wadada Garoowe Iyo Eyl. →